राजनीति Archives - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com राजनीति Archives - खबर प्रवाह
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को विनियोजन विधेयक, २०७९ को प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभामा पनि शुक्रबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिसभामा यही असार ६ गते बजेटसँग जोडिएका अन्य विधेयकमाथि छलफल […]
‘कान्लोबाट खसियो, भीरबाट खस्न बाँकी छ’
हामीसँग संकट छ। धेरै अप्ठ्यारो छ। तर समाधानहीन अवस्थामा पुगेका छैनौं। राजनीति त्यहाँ पुगिसकेको होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन पुगिसकेको होइन। हामीसँग अझ धेरै सम्भावना छन्। कतिले भन्छन्– कम्युनिस्टहरूले ठक्कर खान अझै बाँकी छ। कति युवासाथीहरूले भन्छन्–‘कान्लोबाट खसियो, भीरबाट खस्न बाँकी छ।’ माथिको मान्छे (शीर्ष नेता)को इगोका कारण अझै कत्रा–कत्रा ध्वंश हुन्छन्। यही सम्झेर कति साथीहरू निराश […]
बालबालिकामा पनि लोकप्रिय छन् एमाले अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक डायनामिक लिडरका रुपमा चिनिन्छन् । अन्य नेताहरुले राजनीति मात्रै गरिरहँदा उनले भने जीवनका हरेक पाटोहरुका विषयमा ज्ञान राख्ने मात्रै नभएर अनुभूति नै गर्नुपर्ने ठान्छन् । उनी बहुमुखी प्रतिभाका धनीका रुपमा समेत चिनिन्छन् । उनी चौतर्फी विषयवस्तुमा ज्ञान राख्न उत्सुक हुन्छन् । त्यति मात्रै होइन उनी राजनीतिमै पनि […]
क्रान्ति अझै बाँकी छ, निर्णायक संघर्ष आवश्यक : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले क्रान्ति अझै बाँकी रहेकाले निर्णायक संघर्षको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आइतबार सम्पन्न एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको पूर्णबैठकमा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले माओवादीले जितेका १२२ स्थानीय तहलाई विकासको मोडलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै देशका नमूना बनाइने प्रतिबद्धता […]
पदम भण्डारी। नेतामा हुनुपर्ने गुणहरू पैसाले किनेर पाइने कुरा होइन। नेतृत्वकला अरूलाई प्रभावमा पार्नसक्ने अदृश्य उर्जा हो। यहाँ अहिलेको प्रसंग कमरेड प्रचण्डको हो। जसले जतिसुकै गाली गरेपनि प्रचण्ड व्यक्ति लोकप्रिय, सबैको विश्वास र आकर्षणका केन्द्रमा छन्। प्रचण्डलाई लगभग कसैले पनि प्रतिरोध गर्न सक्दैन। प्रचण्डले कसले के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्छन्। कसैले जायज प्रस्ताव लिएर गयो […]
माओवादीका जनपक्षीय निर्णय : निःशुल्क बिजुलीदेखि ऊर्जामा दीर्घकालीन नीतिसम्म
काठमाडौं। जब जब माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुन्छ वा संयुक्त सरकारमा माओवादी सहभागी हुन्छ, त्यतिबेला केही न केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। सोही आधारमा सबै नागरिकले राज्यबाट समान रूपमा सेवा र सुविधा पाउने वातावरण तयार पारेको छ। अघिल्लो पटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा […]
आफ्नै क्षेत्रमा गोकुल बास्कोटा कमजोर, प्रभाव भएका एमाले नेताले छोडे साथ्
काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचनले देशभरको राजनीतिक माहोल तातिएको छ । दलहरूले चुनावी प्रचारको अभियानलाई तिब्र रूपले दौडाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले चुनावमा तालमेल गर्ने नगर्ने बिषयमा निर्णयमा नपुग्दा एमालेलाई थप सहज बनेको छ । चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू तिब्र बन्दै गर्दा जनमानसमा कुन पालिकामा कसले बाजी मार्ला भनेर हिसाबकिताब भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, […]
माओवादीले निर्वाचन जित्ने आधारहरू
काठमाडौं। २०७३ श्रावणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचन भइञ्जेलसम्म देश केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। देशमा पञ्चायतले तोकेका ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला विद्यमान थिए। देशमा २१७ नगरपालिका र ३१५७ गाविसहरू थिए। तिनीहरू स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संरचनाहरू थिएनन्, केन्द्रीय निर्देशन पालना गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रहरू थिए। विकास क्षेत्रमा प्रशासकहरू तोकिन्थे। राजाको शासनकालमा १४ अञ्चलमा […]
अमेरिकाको धम्कीले डराउँदैनौँ सम्राज्यवादीको भण्डाफोर गर्छौँ : देव गुरुङ
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा , एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई धम्कीपुर्ण फोन गरेको विषयमा नेकपा मोओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले खरो प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको फोन विदेशी हस्तक्षेपको नांगो रुप भएको भन्दै गुरुङले सार्वभौम नेपाली जनतालाई यो स्विकार्य नभएको बताएका […]
प्रचण्ड यो देशको महानायक हो, उहाँकै कारण गणतन्त्र आएको हो : मल्ल
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता झकबहादुर मल्लले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले नेपाली समाजलाई कायापलट गरेको बताएका छन् । हिजो (मंगलबार) एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘त्यो क्रान्तिको उपलब्धिलाई बोध गरेर कमरेड प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका हौं । प्रचण्डलाई […]
मैले आगोसँग नखेल्नुहोस् भनेकै थिएँ, अहिले त ओलीले देखे होलान् : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कथित मधेशका मसिहाबाट मधेशी जनताको मुक्ति सम्भव नरहेको बताएका छन्। सर्लाही समन्वय समिति काठमाडौंले सोमबार जोरपाटीमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी जनताको अधिकारका निम्ति लडिराख्ने पार्टी माओवादी नै भएको जिकिर पनि गरे। ‘माओवादीले मात्रै मधेशी जनतालाई मुक्ति दिलाउन सक्छ। दलालहरू मधेशको मसिहा […]
ओलीले भने: जालझेल भयो, एमाले फुटाए राम्रो हुँदैन
काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रोशित बनेका छन् । उनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लागू गरी एमाले फुटाए सरकारलाई महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले यो अध्यादेश एमाले फुटाउनकै लागि ल्याइएको बताए । मंगलबार संसद भवनको ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको […]
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा आउन सक्ने वातावरण नरहेको बताएका छन् । उनले नेपाल समूह नआउने भएकैले सरकार गठनको प्रक्रियाबारे फेरि छलफल गर्न पर्ने देखिएको समेत बताएका छन् । माधव नेपाल सरकारमा नआउने भएकैले अब मन्त्रालय भागवण्डाबारे फेरि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही […]
दासढुंगा घटना भएको आज २८ वर्ष पुगेको छ । तर पनि त्यो घटना रहस्यमय नै छ । त्यो सुनियोजित हत्या थियो या दुर्घटना त्यो भने रहस्यमयकै विषय बनेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तथा एमाले उपाध्यक्ष एवं मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुई -दुई पटक भए तर पनि उनीहरुले यो घटनाको छानबिन […]
ओली समूहले जबज पढेको पनि छैन, बुझ्नु त टाढाक‍ो कुरा हो : भुसाल
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले केपी शर्मा ओली समूहले जबज ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै नपढेको बताएका छन्। हिमालय टेलिभिजनको यक्ष प्रश्न कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिने क्रममा नेता भुसालले ओली समूहले जबज नपढेको र जबज बुझ्नु टाढाको विषय भएको बताएका हुन्। केपी ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद यो हो भनेर त्यसको क्रान्तिकारी सारलाई बोलेको कुरा आफूले अहिलेसम्म […]
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको नैतिकता पनि सकिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदै गर्दा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएपछि डा. कोइरालाको यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । विराटनगरमा रहेका कोइरालाले नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको कुराकानी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भनेका […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्घ अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने अन्तिम तयारी भईरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को निर्णय कुरिरहेका छन् । जसपा संसदको चौंथो ठूलो दल हो । जसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्घ अविश्वास प्रस्ताव लैजाने र कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउनेबारे छलफल भैरहेको छ । […]
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका उनलाई फर्केलगत्तै कोरोना पुष्टि भएको हो । अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौं फर्किएक रायमाझीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि जिल्लामा समेत त्रासको वातावरण बनेको छ । रायमाझीमा कोरोनाका कडा लक्षण देखिएका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि रायमाझी वीरेन्द्र […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई एमालेकै ओली पक्षका नेता गोकुल बास्कोटाले व्यंग्य गरेका छन् । बास्कोटाले नेता नेतापल्प राजनीति कुन्ती मोक्तानको गीत जस्तै धरान धनकुटा भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेता नेपालले आधा शताब्दीदेखि सिद्दान्तको राजनीति गर्दै आएको हुँ भनेपनि अदालतमा धाएको देख्दा कानुनका नौ सिङ जस्तै लागेको उनले […]
राजनीति प्रचण्ड- एक रोमान्टिक नेता
Breaking News सङ्घीय सरकारसहित छ माओवादीका अर्थमन्त्रीको बजेट : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित
राजनीति क्रान्ति अझै बाँकी छ, निर्णायक संघर्ष आवश्यक : प्रचण्ड
राजनीति बालबालिकामा पनि लोकप्रिय छन् एमाले अध्यक्ष ओली
राजनीति ‘कान्लोबाट खसियो, भीरबाट खस्न बाँकी छ’